LABA-LAAKO: Jaamacadda Carabta oo ay kasoo socoto arrin Somalia taagi karta meel xasaasi ah (3 qodob oo ay tahay in aan maanka ku hayno) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka LABA-LAAKO: Jaamacadda Carabta oo ay kasoo socoto arrin Somalia taagi karta meel...
LABA-LAAKO: Jaamacadda Carabta oo ay kasoo socoto arrin Somalia taagi karta meel xasaasi ah (3 qodob oo ay tahay in aan maanka ku hayno)
(Dooxa) 16 Juun 2021 – Jaamacadda Carabta ayaa bilowday qorshe lagu cadaadinayo biyo-xireenka ay ku baxayso $5 bilyan ee doollar ee Itoobiya, iyadoo uu Wasiir Dibadeedka Qadar, Mohammed Bin Abdul Rahman Al Thani, uu shalay caddeeyey in dalkiisu uu taageerayo “walaalaha Carbeed”, mar uu ka hadlayey kulan ay Wasiir Dibadeedyada JC ku yeesheen Dooxa.
Waxaa sidoo kale kulankaa ka hadlay Xoghayaha Guud ee JC, Ahmed Aboul Gheit, oo ku dooday in dalalka JC ay Golaha Amaanka ee QM ugu baaqayaan in ay fadhi ka yeeshaan buuxinta biyo-xireenka ay ku biliwday Addis Ababa, taasoo ay diiddan yihiin Qaahira iyo Kharduum.
Tadawurkan cusub ee diblomaasiga ah ayaa meel qalqiil ah istaajin kara Somalia oo dhinacyada is haya xiriir la wada leh, isla markaana aysan istaraatijiyad ahaan anfacaynin inay dhinac si muuqata ula safato, booska nugul ee ay taagan tahay darteed.
Waxaa kale oo dhici karta in Qadar oo ka mid ah dalalka xiriirka nisbiga ah ee kuwa kale ee Khaliijka ka dhow haatan la leh DF Somalia, ay ka shaqayn karto qaab loo heli karo codka Somalia, iyadoo haatan u danaynaysa Masar oo ay la heshiisey.
Yeelkeede, Somalia uma baahna inuu codkeedu noqdo mid ay dalal kale ku xisaabtamaane, waa in aan wax ku yeelno ama ku diidno annagoo mar kasta ka duulayna danaha istaraatijiga ah ee Somalia, annagoo aan dabcan cidna colaadinaynin.
MAXAA U EG SOMALIA? Wadiiqada ugu wax ku oolsani waa in ay Somalia istaagto boos dhex dhexaad ah 3 sababood awgood:
1 – Somalia maba laha muhiimad diblomaasi ah oo buuran maanta, waayo diblomaasiyaddaada caalamiga ihi waxay had iyo goor saami gal toos ah la tahay sida uu dalkaagu u yaallo maxalli ahaan.
2 – in dalalka is haya ay Somalia la kala safato waxay Somalia taageeysaa makaanad dhib badan oo abuuraysa cadaawad istaraatiji ah iyo in Somalia loo arko dal ay labada dhinac ee is hayaa isu adeegsan karaan, taasoo ahayd isha dagaallo badan oo aannu horay Itoobiya ula galnay, waloow dadka loogu sheegayey in dhul Soomaaliyeed la xoraynayo amaba ay xitaa sidaas nala ahayd. ”Wax annaga dhul Soomaaliyeed naga galay ma jiraane waxaan u adeegsanaynaa mashquulinta Itoobiya.” ayaa laga sheegay Wasiir Masri ah.
3 – Maadaama dalalka is haya aynaan midna cudud iyo cood ku kordhinaynin, waxaa noo wanaagsan in aan ku niraahno ”idinku ka macaamila wixii idinka dhexeeya”, annagoo qaadanayna casharkii qaraaraa ee aynu ka barannay in siyaasadda caalamku aanay ku shaqaynin jacayl iyo nacaybe ay dantu hagto.
Qiyaas inta dal ee ay Somalia u hiillisay berigii ay dhisnayd ee aanu midna kaga soo gurmanin markii ay burburtay.
Sidaa darteed, micnuhu ma aha inaan jeclaannay Itoobiya iyo inaan nacnay Masar iyo Suudaan ee waa inaan danteenna qaran (national interest) siinayno muhiimadda 1-aad.
Previous articleLaba CILLADOOD oo xiriirka Somalia ceeb ku ah oo kasoo baxday magacaabista macallinka la cayriyey
Next articleGOOGOOSKA + SAWIRRO: Italy vs Switzerland 3-0 (Talyaaniga oo usoo baxay 16-ka)